Ndao tohizina ny famadihana ny nofy ho zary tenany - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ndao tohizina ny famadihana ny nofy ho zary tenany
Ratalata Jn Ba il y a 3 mois
Elaela izaho sy ianao no tsy nitafa teto. Nangina ny morom-parihy. Nandalo dezaka ny tena. Tapaka rezo. Tsisy mpanao combien… Nofohazin’ny revy lasa tena izy ny tafatafan-dRatalata. Notairin’ny nofy zary tenany. Arahaba mahaiza manohy.
Indray andro lesy izahay ry zanako mbola bitika ialahy tamin’izany nanana Ekipam-pirenena isika ka BAREA no anarana nisalorany. Midika ho ombalahy be vozona izany anarana izany. Ombalahy manoto ary tsy mihemotra.
Nampianarin’io ekipam-pirenena io zavatra maro izahay... Lasa nahay nanofy ary namadika ny nofy ho tena zavatra iainana. Lasa nahay nifanohana, lasa nahay nifankatia. Alaivo an’eritreritra iny lalana eny amin’ny Gara Soarano iny ka hatreny Analakely iny e, eny e iny lalana iny. Raha taloha tolona politika no nampalaza azy tolona fitakiana fialan’ny mpitondra dia ny Barea kosa nitarika anao namadika pejy ka zary nataonay tokontany fandihizana sy fankalazana tena hipoka olona, nidobo-kafaliana ny rehetra teny. Hira amanjatony, olona tsy hita isa miakanjo mitondra ny lokon'ny sainampirenena, horakoraka tsy nifandrenesana... Inona izany e ?
Inona hoy ialahy ? Tonga hatrany teo amin’ny lalao ampahefa-dalana amin’ny fifaninanana CAN 2019 ny ekipam-pirenena. Nandeha teo amin'ny fahitalavitra ary nampitolagaga an’izao tontolo izao ny dia nolalovan’izany Barea izany. Natao bitika ary efa noheverina ho tsy avela hamindro kinanjo izy indray no nitondra hazavana sy hafanana tao amin’izany CAN 2019 izany... Hitan’izao tontolo izao ireo boaikely nampisalotra ny lohany tandroka nataony tamin’ny tanany rehefa nahafaty baolina. Latsaka leitsy ny ranomasonay sy an’i nenin'ialahy. Eny nian-dahy niam-bavy anie izahay nijery izany Barea izany e raha noheverina fa raharahan-dehilahy ny baolina kitra andavan’andro. Fantaro fa tao ambadika tao nisy famaranana coupe du monde vehivavy fa tsy nahataitra ny Vahoaka Malagasy tao ihany koa ny lalao mfana nisy nandritra ny Copa Amerika fa e e e Barea ihany e. Lasa raharaha iombonana. Ka na ny hiaka Alefa Barea aza dia noraisin’ny vahaka hafa ho hiaka zary nalaza tahaka ny Hala Madrid e.
Nilaharana toy ny betax mampijaly rehefa mby hariva ka hody avy eny Andranomena ny fiaramanidina hitondra ireo izay vonona hanohana mivantana tany Ejipita, ary ranomasom-pifaliana tany na taty, na ny Filohampirenena mivady aza tsy nahatana tsinjaka... Tantara mila tadidin'ialahy izany satria nanamarika ny tantaram-pirenen’ialahy... Mila tairina sy tsaroana matetika mila kopahina hatrany mba tsy ho faty sy tsisy tohiny tahaka ny taorian’ny nahazoan’ny ekipam-pirenena vehivavy ny anaram-boninahitra tompondakan’i Afrika teo amin’ny taranja basikety. Eny leitsy efa nisy koa izany fa izay indrindra azo dia tsy hita ka sary tsis mitoetra.
Ndao leitsy ialana izany mba indray andro any raha manontany an’ialahy any aoriana ka manao hoe “Fa mba iza io ekipa manao famaranana io... ?” Dia tsotra... io manao finale io leitsy ny taranaky ny Barea a… lalao famaranana CAN hatreny amin’ny famaranana coupe du monde. Tsy ho azon-tampona ny dia : hoy Ratalata nitafa taminao.
Misaotra Barea… raisina ho adidintsika ny mitantara ary indrindra mamadika ny revy ho bainga mivadika isan’andro toy ny fanafoanana ireny filaharana betax mampijaly vahoaka ireny toy ny vidim-piainana midangana tsy afahan’ny boaikely misakafo ary mitombo araka ny tokony ho izy. Ho Malagasy mifanohana miara-mironjona, miara-mandroso, ny any aloha manao haingana e ny ao afara manao hoe alefa Malagasy a Alefa Madagasikara a.
Hevitra nalaina amin'ny amphany betsaka tao amin'ny pejy fesiboky Mr Sayda
Feon'i Lakroa : 8 oktobra 2019 - il y a 4 jours
Mbola Barea : Ndao tohizina ny famadihana ny nofy ho zary tenany - il y a 3 mois